USB Disk Security v6.1.0.432...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ USB Disk Security v6.1.0.432 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အသုံးလိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ...! သုံးရတာအဆင်ပြေအောင် Serial Key လေးတွေပါထည့်ပေးထားတယ်...! Patch ဖိုင်လေးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 5.45MB ရှိပါတယ်...!အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာMedia Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
1 Response to USB Disk Security v6.1.0.432...!
USB Disk Security softwar လေးယူသွားပါတယ်
ညီလေးရေ.... အသုံးလည်း တဲ့ သလို စက်ထဲမှာ လည်း
ရှီထားသင့်တဲ့ softwar လေးပါ... အခုလို မျှဝေပေးလို့